चिनियाँ कम्युनिस्टहरुले सान्स्कृतिक क्रा´न्तिको माफी मागी सके, नेपालमा अझैसम्म धर्म बिरोधि !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
चिनियाँ कम्युनिस्टहरुले सान्स्कृतिक क्रा´न्तिको माफी मागी सके, नेपालमा अझैसम्म धर्म बिरोधि !
हार्डलाइन कम्युनिस्ट भर्सेस पर्वहरु- १९६६ मे १६ बाट सुरु माओको चिनियाँ सान्स्कृतिक क्रा´न्तिको बेला विभिन्न धार्मिक अखडा र संस्कृतिक धरोहरहरु भत्काइएको थियो! तिब्बतमा त्यो ज्यादा भएको थियो। र, तिब्बत सिमामा जोडिएको नेपालका कम्युनिस्टहरुले पनि धर्म विरुद्ध र धार्मिक कल्चर विरुद्ध बोले! अत्यन्तै धेरै बोले। माओको अभियानमा मार्क्सको कम्युनिजम भन्दा चर्चप्रती बफादार तत्कालिन युरोपेली जमाततर्फ इङित “धर्म अ´फिम हो” भन्ने भनाइले बल पुर्यायो।
तर, १९८१ जुनमा सान्स्कृतिक क्रा न्तिमा गलत भएको र पार्टी तथा जनतालाइ अत्यन्तै बेफाइदा गरेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णयनै गर्यो। अहिले सि जिङपिङ हरेक कुरामा चिनियाँ कल्चर जोड्दै छन् ।
कतिसम्म भने अग्ला भवन देखि विमानस्थलसम्म चिनियाँ लाइनमा बन्नुपर्ने उनीहरुको नीति छ। ताओवाद, तिब्बती बौद्धवाद र कन्फ्युसिअसवादको सबैभन्दा धेरै ब्रान्डिङ र बिज्ञापन चिनियाँ कम्युनिस्ट सत्ताले गर्दैछ ।
अहिले नेपालमा सि जिङ पिङ बिचार आइसक्यो। तर, मौलिक कल्चरलाई सम्मान गर्ने कुरामा इजि हुन हाम्रा हार्डलाइनर कम्युनिस्टलाई अझैसम्म पुरानो ह्याङओभरले गर्दा निक्कै असहज छ। त्यै भएर दसै मनाएको, तिहार मनाएको उनीहरुलाई गर्वसाथ पोस्ट गर्न तनाव छ। तर, साकेला, ल्होसार,छैट ,देउडा आदि चै उनीहरु मज्जाले मानाएको देखाउछन। साकेला, ल्होसार, छैट र डेउडा नि दसै तिहार झै धार्मिक पर्व हुन। उनीहरुको बिरोध कम्युनिस्टले गर्दैनन् ।
किनभने जतिबेला हार्डलाइन कम्युनिस्टले धार्मिक कुरामा बिरोध सुरु गरे, त्यो बेलामा यी पर्वहरु मेनस्ट्रीम थिएनन् । भएको भए, यिनिहरुको पनि गर्थे । धर्म निजि दैनिकि चलाउने कल्चरल दर्शन हो अनि कम्युनिजम सत्ता चलाउने राजनीतिक दर्शन हो! यी दुई एक अर्काका बिरोधी होइनन् ।
धर्मका अधर्म मात्रै हर्नुपर्छ। धर्म नै हट्नुहुन्न भन्ने सामान्यज्ञान मात्रै बुझ्नेले जिन्दगीभर कम्युनिस्ट भएकोले धार्मिक हुन नपाएको पीडा र कुन्ठा राख्नु पर्दैन !!!